इलामले नदेखेको, झापाले नहेरेको ‘बहुवन’ - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ १८, इलाम । ‘इलामले नदेखेको, झापाले नहेरेको’ । यो कुनै एक व्यक्तिले भनेको कुरा होइन् । यो दक्षिणपूर्वी रोङ गाउँपालिकाको इरौंटार बहुवनका बासिन्दाले वर्षाैंदेखि भन्दै आएको एउटा वास्तविक समस्या हो ।
‘‘यहाँ हरेक प्रकारका काम गर्दा स्थानीयवासीले नै श्रमदानसँगै आफैं चन्दा उठाउनुपरेको छ’’ स्थानीय वृहस्पति खतिवडाले भने, “अन्न भण्डारको रूपमा रहको यो क्षेत्रमा कृषकलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्य जरूरी छ ।”
दुबै जिल्लाबाट हालसम्म कृषिसम्बन्धी कुनैपनि काम सञ्चालन नभएको उनीहरू बताउँछन् । सिँचाइ सुविधा नहुनु उनीहरूको ठूलो समस्या हो । सुके निन्दाबाट ३ किलोमिटरको योजना हुने हो भने गाउँलाई सिँचाइ सुविधा पुग्ने खतिवडाको भनाइ छ ।
‘‘स्थानीय प्रयासमा सम्भव नभएकाले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन,’’ स्थानीयवासी चन्द्र मगरले भने, ‘‘सिँचाइ सुविधा हुने हो भने यहाँको उत्पादन दोब्बर हुने थियो ।’’
यो क्षेत्रमा सुपारीबाट मात्र प्रत्येक घरले वार्षिक ४० हजारदेखि दुई रु. लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । केराखेतीबाट पनि रु. १ लाखभन्दा धेरै कमाउने कृषक धेरै छन् । अलैंँची, निबुकागती, ज्यामिरलगायतका धेरै फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ ।
बहुवन माथिको इरौंटार क्षेत्र पनि फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । प्रत्येक घरमा सुपारी, कागतीलगायतका खेती हुने गरे पनि सिँचाइ र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा किसानले कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत लाभ लिनसकेका छैनन् ।
‘‘खानेपानी पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा खेतीबालीमा त लगाउन सम्भावना नै छैन,’’ जिरी खिम्तीकी रेखा राईले गाउँको दुखेसो पोखिन् ।
« म सामुहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छु– रञ्जित तामाङ [अन्तरवार्ता] (Previous News)
(Next News) स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज »